पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा सुगतरत्न 'डेन्जर' ! (भिडियो)
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा सुगतरत्न ‘डेन्जर’ ! (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारविरूद्ध शुक्रबारको लेखा समिति बैठकमा सांसदले चर्को आक्रोश पोखे। कंसाकारलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि तगडा भन्दै उनका हर्कतको विस्तार लगाउँदा सांसद थाकेनन्।
दुईवटा वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचारका मुख्य नाइके कंसाकार नै भएको सार्वजनिक लेखा समितिका अधिकांश सदस्यले ठहर सुनाए। कंसाकारलाई ‘वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचारका महानायक’ भन्दै उनको निकै चर्चा भयो। कंसाकार पछि चर्चामा रहे बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी। मन्त्री अधिकारीले कंसाकारलाई बचाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको र धम्क्याएर प्रमाणहरू लिक हुन नदिएको सांसदले आरोप लगाए।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले निगमका एकजना कर्मचारीले आफूलाई बोलाएर नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्री अधिकारी र कंसाकारबीचको साँठगाँठ खुलाएको दावी गरे। उनका अनुसार कंसाकारलाई सघाउन र कुनै पनि कागजातहरू बाहिर नल्याउन कर्मचारीलाई धम्की दिएको यादवले दावी गरे।
उनले कंसाकारलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि तगडा भन्दै कसैलाई नटेर्ने जिद्दी स्वभावका बताए। कंशाकारले कर्मचारीलाई डर धाक देखाएर आफ्ना कर्तुत लुकाउने गरेको आरोप लगाए।
अर्का नेकपाका सांसद प्रेम आलेले सुगतरत्न कंसाकारको ‘नामै डेन्जर’ भन्दै उनको नालीबेली सुनाए। उनले पनि कंसाकारलाई भ्रष्टाचारको महानायक बताए।
Tagsनेपाल वायुसेवा निगम सुगतरत्न कंसाकार